Chii chaungaone kuChina | Kufamba Nhau
Chii chaungaone kuChina
Maria | | China, Asia kufamba
Kuve nyika yechitatu pakukura pasirese, ine nzvimbo dzinoshamisa dzepanyama, tsika dzekare nemaguta anosanganisa tsika neavant-garde, hazvishamise kuti China ndiyo imwe yenyika dzakashanyirwa zvakanyanya muFar East. Asi ndedzipi nzvimbo dzekuona kuChina dzausingafanire kupotsa? Bvisa bepa nechinyoreso tinokutsanangurira!
Guta guru nderimwe remaguta makuru pasi rese uyezve nderimwe rinonakidza kwazvo mukondinendi. Nhoroondo yaro yakadzokera kungangoita 1000 BC uye nhasi ine huwandu hwevanhu vanopfuura mamirioni makumi maviri nemaviri. Kana iwe uri kufunga nezvekuenda kuChina, Beijing inofanirwa kuve, pasina mubvunzo, imwe yenzvimbo dzakakosha munzira yako.
Chazvino netsika zvakasanganiswa zvisingaiti usingazvizive uye unogona kuwana zvivakwa zvinonakidza seTembere yeDenga kana Guta Risina Kurambidzwa, nzvimbo dzine nhoroondo senge Tiananmen Square kana Mao Zedong Mausoleum pamwe neavant-garde skyscrapers, mashopu nemaresitorendi.
Kunze kweBeijing kune nzvimbo dzinonakidza dzekuona kuChina seGreat Wall, Summer Palace uye Kunming Lake kana makuva eMing dynasty.
Kunyangwe iwe uchigona kupedza kanokwana svondo muguta, mazuva matatu ndiyo nguva shoma yekunakidzwa nezvayo zvinokwezva zvikuru.
Chengdu ndiro guta guru reruwa rweSichuan uye guta rinodyiwa ndiro dzakanyanya kuChina, ndosaka rakatumidzwa senzvimbo yekudyira neUNESCO. Iyo yechinyakare zvinonhuwira ipepuru tsvuku uye zvakajairika kushandisa Sichuan nhema mhiripiri kugadzira nyeredzi dhishi yechikafu cheko: hari inopisa, yakavakirwa panyama, miriwo nehove.
Zvakare, Chengdu ndiyo nzvimbo yekuzvarwa yepandas. Kune akati wandei ekuchengetedza nzvimbo uko mapanda mazhinji anogara mune semi-rusununguko yakakomberedzwa nemishenjere. Munguva dzekare pandas dzaishandiswa sechishandiso chezvekudyidzana uye kunyangwe sechombo chehondo. Nhasi pandas chiratidzo cheChina.
Kune rimwe divi, mune rino guta unogona kuwana rakakura ibwe Buddha rakambovakwa: iyo Leshan Buddha. Kuyera 71 metres kumusoro ne28 kukwirira. Kuvakwa kwaro kwakatangira mugore ra713 uye iri chikamu cheUNESCO World Heritage Site kubvira 1996. Inomiririra tariro nekubudirira.
Imwe yematanho erwendo kuburikidza neChina inofanirwa kunge iri Xian, imba yevanonyanya kuzivikanwa varwi verusununguko. Muna 1974, netsaona murombo akawana wekutanga wemazana masere ehupenyu hukuru hwezana ramakore rechitatu BC mauto akachengetedza guva ramambo wekutanga weChina aine vateveri vake vemabhiza nengoro. Kunyangwe zvakaoma kutenda, hapana zviso zviviri zvakafanana pakati pevarwi veXian.
Chokwadi ndechekuti muXian iwe unogona kuwana yakanyanya yechinyakare China mumadziro ayo uye iyo Bell uye Drum shongwe. Ivo zvakare vane inonakidza nzvimbo yeMuslim.
Mune iyo delta yeiyo yengano Yangtze Rwizi, rimwe remaguta ane vanhu vakawanda pasi rose riri: Shanghai, iyo yakave chiratidzo cheguta rakasiyana-siyana rekuChina tekinoroji uye hupfumi kufambira mberi.
Shanghai ine runako rwekuzvarwa semhedzisiro yemusanganiswa pakati pazvino neyechinyakare, sezvo paine nzvimbo dzekuvakidzana idzo dzakareba uye dzimwe dzinotitakura kuenda kuchinyakare China.
Bund inzvimbo ine zvivakwa kubva panguva yekoloni neEuropean dhizaini inokukoka iwe kuti ufambe rwendo rurefu uchitevedza Rwizi Huangpu nepo Pudong inharaunda yemari yeShanghai, iyo yakavakwa mukati memakumi maviri emakore apfuura nekutaridzika kwazvo kweramangwana.
Dzimwe nzvimbo dzekufarira kuona kuChina panguva yekushanya kuShanghai ndiyo Quarter yeFrance, Musika weJiashian kana Guta Rekare, iro guta rekare rine makore anopfuura mazana matanhatu enhoroondo.
Hong Kong nderimwe remaguta anonyanya kufadza uye emazuva ano mupasi akazara nemisiyano. Kubva kuAvenue of Stars, iwe unogona kuona skyscrapers yakavhenekerwa nemwenje wezuva nezuva pa20: 00 masikati uye chinofanirwa muHong Kong kukwira Victoria Peak, gomo refu kwazvo muguta, panguva yehusiku. Sevha mazuva mashoma ekugara kwako kuti uwane chikafu cheCantonese, pati uye shanyira masitepisi akareba kupfuura mamwe ese pasi, Iwo maCentral-Mid-Chikamu anokwira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Asia kufamba » Chii chaungaone kuChina
Chikafu chechinyakare kubva kuSpain